RIKOOOO MD11 AND 777 nokukoromoka
mubvunzo RIKOOOO MD11 AND 777 nokukoromoka
1 gore 8 ago #599 by suythe
Ndave kushandisa Rikooo A330 yaro wonderfull, asi munguva ichangopfuura ndakaedza vamwe zvinhu akadai MD-11 uye 777
zvigadzirwa avo anoramba kurovanya kamwe kuenda neherikoputa. kana ndinoita mamwe manuveors P3D achaita anorovera.
Tariro I kuwana zvimwe kupedza dambudziko iri.
1 gore 8 ago #600 by Dariussssss
Hello ikoko uye kugamuchira Rikoooo.
Ndainge kushandisa zvose wavo pamusoro FSX, pasina dambudziko. Unofanira nechokwadi chokuti ndege uri kushandisa muri inowirirana P3D wako. Kana iwe kuzarura Peji, ngatiti-MD-11, uchaona ichi: Nokuti FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 kuedza), saka unofanira kuva nechokwadi chokuti zviri enderana.
Sezvakangoita unoti v2 uye v3 kuedza, zvikanganiso zviri ingangodaro.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: suythe
Time chokusika peji: 0.160 mumasekonzi